/शोकाकूल परिवारलाई दशा, युट्युबरलाई दशैँ
प्रेम सुनार रुकुम ।‘सुन्नहोस् है, तपाईंहरुले जति पीडा, वेदना, रोदन र चित्कार छाड्नुहुन्छ उति नै छिटो न्याय पाउनु हुन्छ ।’
रुकुम जाजरकोट घटनाबारे एकजमात नेपाली युटुवरहरुले अलिकति पनि मानवीयता, सामाजिक उत्तरदायित्व र संवेदनशिलता देखाएनन् ।
यो मात्र हैन उनीहरु हरेक घटनालाई यसरी नै लिन्छन् । जहाँ प्रहरीले अनुसन्धान गर्न थालेको हुँदैन, उनीहरु आफै पुलिस बनेर केरकार गर्छन्, न्यायाधीश बनेर युट्युबबाटै फैसला गर्छन, देश विदेशमा रहेका जनतालाई भ्रमित पारेर युट्युबबाट डलर झारेर बाटो लाग्छन् । यो अहिलेको यथार्थ कटु सत्य हो ।
तपाईं आफै रुकुम घटना राखिएका युट्युब हेर्नुस, के त्यहाँ माथि उल्लेख गरिएका कुरा पालना गरिएको छ त ? पक्कै पनि छैन ।
शब जलाइरहेको ठाउँमा पुगेर पनि उनीहरुले मृतकमा बाबुसँग कुरा मात्र गरेका छैनन् शवको विभत्स तस्विर दृश्य समावेश गरेर सन्त्रास र उत्तेजना फैलाएका छन् ।
अहिले युट्युबरले अपराधको सम्पूर्ण दोष ती युवतीलाई लगाएका छन् । के ती युवतीको बाँकी जिवन छैन ? घटनामा त आवेश र आक्रोषका क्रममा उनका परिवार र गाउँवासी सहभागी भन्ने कुरा छ ।
अनुसन्धानमा उनी निर्दोष हुन पनि सक्छिन् ।
पत्रकार महासंघकी केन्द्रीय सचिव लक्ष्मी पुन भन्छिन्, ‘सुष्मा अहिले थुनामा छिन्, सञ्चार सम्पर्कबाट बिच्छेद अवस्थामा ।
आफ्नो विषयको पैरवी गर्नका लागि अदालती प्रक्रिया बन्द भएका कारण उनी समर्थ छैनन् ।
तर, युट्युबरले उनको एकोहोरो बद्नाम गरिरहेको छ । उनको प्रोफाइललगायत छानिछानी तस्विर सार्वजनिक गरिएको छ ।’
बुटवलबाट संगिता गौतम अर्यालले फोन गरेर भनिन्, ‘रुकुमको नारावाजी र बाहुनहरुलाई गाली गरेको सुन्दा वाहुनकी छोरी हुँ भन्न पनि दुःख लाग्यो । मेरो घर गुल्मीको जुभुङ्ग हो । म ईस्मामा धेरै बर्ष बसेँ ।
त्यहाँ मेरी परिायर थरकी साथी थिईन । उनीसँग बर्षौ पछि पाल्पामा भेट हुँदा मेरो गह भरिएर आयो । काम गरि खाने र जन्मिदै सिप लिएर जन्मिने दलित समुदालाई दलित भन्न मलाई मन लाग्दैन । आखिर बाहुन क्षेत्री यस्तो मन र समानताको पक्षधर पनि त छन । अनि सबै बाहुन र क्षेत्रीहरुलाई मुछ्ने ?’
अहिले केही युट्युबरहरुको जमात मिलेर दुई चारजनालाई भाइरल बनाउने र उनीहरुलाई जे कुरा मन लाग्छ त्यही कुरा बोल्न लगाउने, झैझगडा गराउने गरेका छन् ।
‘ए पत्रकार भनेका त यस्ता पो हुदोरहेछन्’ भनेर सर्वसाधारणमा पत्रकारको बचेको शाख पनि माटोमा मिलाउने काम गरेका छन् ।
नेपालका केही राम्रा ज्ञानबद्र्धक युट्युब च्यानल पनि छन् । केही सञ्चारगृहले चलाएका जिम्मेवार पत्रकारहरुले काम गरिरहेका च्यानलहरु पनि छन् ।
जसले निकै ओझिला, बोझिला र विश्वसनिय सामग्री पस्किदै सामाजिक उत्तरदायित्वलाई जिम्मेवारीपूर्वक पालना गर्नुभएको छ ।
कतिपयले विपत्तिमा परेकाहरुलाई सहयोग रकम संकलन गरेर सहायता पनि पु-याउनुभएको छ । उहाँहरुलाई मेरो साधुवाद छ ।
तर एउटा युट्युबरको तप्का यस्तो छ जो आफूले आफैलाई पत्रकार घोषणा गरेर, आफैले प्रेस पास छापेर घटना दुर्घटना खोज्दै अतिरञ्जित गर्नतिर लागिरहेका छन् ।
घटना दुर्घटना भएको ठाउँमा पुगेर पीडितलाई थप पीडा दिने काम गरेका छन् । पत्रकारितालाई सजिलो पेशा ठानेर मनलाग्दी गर्नेहरुलाई अब राज्यले अनि नागरिक समाजले चिन्ने र नियमन गर्ने बेला अझै आएन र भन्या ?